Vampire Heartbeat (BaekYeol 18+) - KaiSooBaekYeollie HH TaoRis - Wattpad
Vampire Heartbeat (BaekYeol 18+)
259K Reads 10.6K Votes 17 Part Story
By KatspisandiexoL Completed
Vampire Heartbeat (Chanbaek)
Not yaoi...normal (18+)
Exodus night club မှာ အ နောက်တိုင်းဝတ်စုံလေးနဲ့ လည်ပင်းကကြယ်သီး ၃ လုံးလောက်ကိုဖြုတ်လျက် Neck Tie လေးကို ဖြုတ်ထားတယ် Shirt လက်လေးကို တံတော်ဆစ်အထိခေါက်တင် ထားပြီး ယောကျာ်းပီသတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက် နားကားကားလေးနဲ့ မျက်လုံးလေးတွေက ဆွဲဆောင် မှုအပြည့် နှုတ်ခမ်းလေးက နှင်းဆီဖူးရဲရဲလေးအတိုင်းပဲ အသားလေးကဖြူဖွေးနေပြီး Wine ခွက်လေးကိုကိုင် လျက်အထာကျနေတဲ့ Gentleman Park Chanyeol~~~~~~~~
Wine သောက်နေရင်းနဲ့ သူ့ရှေ့ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ ကောင် မ လေးတစ်ယောက် အညိုရောင်ဆံနွယ်လေးတွေနဲ့ ကလိုက်တိုင်းလှပစွာရွေ့လျားတတ်တဲ့ခြေတံသွယ်သွယ်လေးတွေကိုမြင် ရ အောင် ဝတ်ထားသော Long dress က ပေါင် လည်လောက်ထိခွဲထားတယ်
သူမရဲ့ဆံနွယ်လေးတွေကို တစ်ဖက်တည်းကိုစုပြီးသိမ်းထားတော့ လည်ပင်းမှာရှိတဲ့သွေးကြောစိမ်းစိမ်းလေးတွေက ထင်းနေတာပဲ လှပတဲ့ကကွက်များကြားက Kim Nana~~~~~
Yeol ကသူ့ရဲ့ Wine ခွက်လေးကို bar counter ပေါ်တင် လိုက်ပြီး သူ့ရဲ့ရှည်လျားတဲ့ခြေတံတွေနဲ့ ကရင်းပင် သူမနားချည်းကပ်သွားတယ် Nana က Yeol သူမအနားရောက်လာတာနဲ့ Yeol ရဲ့လည်ပင်းကို လှပစွာသိုင်းဖက်လျက် Sexy dance ကိုစတင် လိုက်တယ် ...
HunhanSuho6 Jan 22, 2017
4D-Angelique Sep 21, 2015
I really wanna read this story but I have no clue what's going on. All I see are boxes? and words here and there
Theindrakaisoolove Aug 16, 2015
KatspisandiexoL Jul 13, 2015
@WuShyunLaeExol Epi 13 ရောက်နေပီ chinguu ရဲ့
KrisWifyChanBaek Jul 13, 2015
KatspisandiexoL Jul 05, 2015
@sirbank Epi 12 ထိတောင် update ထားတယ်လေ
Get notified when Vampire Heartbeat (BaekYeol 18+) is updated
55.8K 2.3K 36
Love in Maze
88.9K 8.1K 179
ကျွန်တော့်ရယ့် Puppy Baek
100K 9.4K 558
ကိုယ့် ရင်ခုန်သံတွေကိုပါခိုးယူသွား တယ့်
Puppyလေးကို သိပ်ချစ်တယ် *
88K 4.3K 71
124K 7K 80
hunhan 18+ yaoi
Hate To Love ❤ 20+
394K 13K 614
♥_♥ :>   <  20+ fic
My love will still forever(18+)
85.6K 472 14
This is my first + fiction so don't bash me.
Side Effect (Completed)
171K 15.4K 1K
အချစ်​မှာ side effect မရရှိဖူးထင်​ရင်​မင်း မှားသွားမှာ​ပေါ့
အချစ်​ရှိရင်​နာကျင်​မှုဆိုတဲ့ side effect ကို
My fifth fic in Wattpad...
Enjoy yourself....♡ ♡ ♡
Filch & Fight
❤ Baby Wolf 20+++ ❤
12.4K 436 17
လူ​တွေနဲ့​ဝေးရာတောနက်​ထဲမှာ​နေထိုင်​​နေကြ​သော Wu Wolf မျိုးနွယ်​စုရဲ့အငယ်​ဆုံးသား​တော်​​လေး Wu Baekhyun
Seoul မြို့ရဲ့နာမည်​ကြီး​ဆေးရုံကတာဝန်​ရပ်​ဆိုင်းခံထားရတဲ့​ကောင်​​လေး Park Chanyeol
20+ ပါ​နော်​ အသက်​မပြည့်​ရင်​မဖတ်​ရဘူး​ညော်​ ခ​လေး​တွေ ??
​Chanbaek / Baekyeol / VKook /